CAFFEE - Sadaasa 06/2011:
Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba keenyaa, darbees biyya keenyaa keessatti qooda olaanaa qabaachuu keenya hubannee hojii keenya gahumsa yeroon barbaaduufi hojimaata mootummaa eegnee hojjechuu danda’uutu nurra jiraata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti.
Hojii keenya qixa kanaan hubannee haa hojjennu wayita jennu hojiin aarsaa nama hin gaafanne hin jiru jechuu miti. Kana keessa darbuuf immoo, qindoominaan yoo hojjenne wanti nuti hin jijjiirreefi keessa hin dabarre hin jiru. Kana malees, gaggeessummaa bilchina qabuufi bu’a qabeessa ta’e saba keenyaafis ta’e biyya keenyaaf kennuu dandeenya. Kanammoo bu’aasaa argaas jirra jedhan. Kanaaf, hojii keenya hunda iftoomina karaa qabuun hojimaata mootummaa irratti hundoofnee yoo hojjenne qormaata kamiyyuu keessa wanti hin dabarreef hin jiru.
Qormaanni amma gamaa gamanaan nutti aggaamamee jirus hooggansa ykn garee muraasa qofa kan ilaallatu osoo hin taane akka sabaatti kan nutti aggaamamee jiru waan ta’eef hojii keenya karaa bilchina qabuun, iftoominaafi hojimaata mootummaa eegnee yoo hojjenne qarmaanni nuti hin cabsineefi hin injifanne hin jiru jedhan. Kanaaf, hooggansiifi hojjetaan kamiyyuu bakka irratti ramadamee jirutti miira addaafi quuqama guddaan hojjechuu kan qabu ta’uu Kab. Addee Loomiin dhaamaniiru.
Toorbee kana 4552
Ji'a kana 57716
2008 irraa eggalee 2827996
Kan Ammaa Ilaalaa jiran 80